SIDA LOO KORO ISBINAAJKA JIILAALKA ON WINDOWSILL - DALAGYADA CUNTADA
Spinach Waxaa muddo dheer loo yaqaan bacriga iyo karisada sida ilo wanaagsan oo fiitamiin ah, walxaha raadraaca, borotiinka fiber iyo qudaarta. Waxay haysaa guryaha faa'iido leh ma aha oo kaliya cusub, laakiin sidoo kale leh hababka kala duwan ee diyaarinta: waa la kariyaa, la kariyaa, la qaboojiyey. Sidaa darteed, kuwa daryeesha nafaqada caafimaad leh, waxay ku koraan isbinaajka guriga iyagoo raalli ka ah khibradooda.
Ma taqaanaa? In Faaris, taas oo loo tixgelinayo goobta dhalashada isbinaajka, waxaa badanaa lagu daraa qeyb ka mid ah daroogooyinka.
Sida loo diyaariyo abuurka ka hor beerashada
Spinach on windowsill waa koray ka soo abuur ah ee noocyo hore leh caleen, caleemo waaweyn. Beeridda ayaa la samayn karaa wakhti kasta oo sanadka ah. Khubarada ku talinaynaa ka hor inta beerto waxay qoyaan miraha maalin biyo diirran, ka dibna 2-4 saacadood - xal daciif ah oo ah kiniinka potassium. Ka hor inta aan la beeri, waxay u baahan yihiin inay ku shukraan warqad shukumaan ah oo qallajiya wax yar. Haddii shaqada diyaarinta aan la fulin, waa ku filan inaad ku shubto ciid badan ka hor intaadan beeran.
Halabuurka ciidda iyo diyaarinta
Wixii beerista dhaqanka waxay ku haboon tahay wax kasta oo isku dar ah, oo ganacsi ahaan la heli karo, marka laga reebo kuwa ay ka mid yihiin peat, sababtoo ah waxay oxidizes dhulka. Sidoo kale sida carrada loogu talagalay isbinaajka, isku dar ah qumbaha foornada (2 qaybood) leh biohumus (1 qayb) ayaa sameyn doona. Waxaad bedeli kartaa fawaakihda qumbaha ee leh vermiculite ama perlite. At 100 cm² kugu filan inaad ku darto 1-2 tsp. walxaha Intaa waxaa dheer, waxay heystaan ​​qoyaan iyo hana eryin sida fiber qumbaha.
Waa muhiim! Ka hor inta aan la beeri isbinaajka guriga, salka hoose ee dheriga waa in la dhigaa lakabka 2-3 cm dhoobo dhoobo ama walxo kale oo bixin doona dheecaan wanaagsan.
Qorshaha iyo qoto dheer ee abuurka abuurka
Wixii beereed, waxaad u baahan tahay inaad sameyso oolin ku saabsan 1.5 cm qoto dheer, meel abuur ah iyaga ku, iyaga si fudud iyaga kula saydhaa leh ciidda iyo qoyan leh sprayer. Markaa waxaad u baahan tahay inaad ku daboosho weelka oo leh filim ama galaas ka hor caleemaha kowaad. Badanaa 5-6 maalmood ayaa ku filan tan. Waxaad quudin kartaa geedo ka dib muuqaalka caleemo dhowr ah, ama isla markiiba lagu beeray sanduuqyo waaweyn iyo dheriyo.
Waa muhiim! Si joogto ah u yeelato isbinaajka cagaaran ee cusub, waxaad u baahan tahay inaad abuurto abuur cusub oo 10-14 maalmood ah.
Daryeelka iyo shuruudaha isweydaarsiga koritaanka daaqadaha
Isbeddel isbinaajka laga bilaabo beeridda beergooyska ma aha mid adag xitaa kuwa bilowga ah.
Goobta ugu wanaagsan ee isbinaajiga waxay noqon doontaa windowsill on dhinaca qorraxda ee aqalka ama guriga. Isla mar ahaantaana, dhirta lagu beeray guga iyo xagaaga waxay yeelan doonaan iftiin dabiici ah oo ku filan si loo sameeyo cagaar badan. Beeraha xilliga dayrta iyo qaboobaha ma faragelin doono dheellitirka nalalka dhaadheer si loo kordhiyo saacadaha iftiinka saacadaha dhowr saacadaha cimilada daruuriga ah.
Heerkulka ugu fiican ee isbinaajka ee guriga waa 15-18 ° C, si kastaba ha ahaatee, sida caadiga ah waxay u wareejisaa oo waxay hoos u dhacdaa 8-10 ° C on guntgias glazed iyo balalkies. Warshadu waxay dareemeysaa wax ka sii xun maalmo xagaaga kulul. Wakhtigan, waa suurad wacan in ay hoos u dhigto.
Nidaamka caadiga ah, laakiin waraabinta soo noqnoqda ee isbinaajka ayaa siin doona dhadhan caleen wanaagsan. Buufinta joogtada ah ee falejo sidoo kale waxay leedahay saameyn faa'iido leh on warshadda, kaas oo damaanad qaadaya qoyaan badan. Iyo liddi ku ah - qoyaan yar oo hawada u horseedaya fidinta degdegga ah ee warshadda iyo xoqitaanka cagaarka.
Hal bil kadib markii la beero miraha, marka isbinaajusku dhererkiisu yahay 10 cm oo uu leeyahay 5-6 waraaqo waaweyn, waad gooshi kartaa. Sida caadiga ah, warshadu waxay samaysaa cagaarka cusub 2-3 bilood, ka dibna foornada ubaxa u muuqda. Markaa waa in laga saaraa. Waxaad quudin kartaa ciidda oo abuuri kartaa abuur cusub.
Sidoo kale noocyo badan oo cagaaran oo noo yaqaan (dill, dhir, basil), qof walba wuxuu ku koraan isbinaajka daaqadaha si loo sameeyo cuntadooda qoysaskooda kala duwan oo waxtar leh.